Daawo: Qayla dhaanta Somaliland ee ku wajahan Fawsiyo Yuusuf iyo saamaynta siyaasad ahaan ay ku dhex yeelankarto - iftineducation.com
iftineducation.com – Iyadoo horay loogu magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dhawr shakhsi oo ka soo jeeda Beelaha Isaaq ee Somaliland ayay Wasiirka Cusub ee arrimaha dibadda ,Marwo Fawsiyo Yuusuf Xaaji Aadan noqonaysaa Shakhsigii gu saamaynta Badnaa ee Soomara Dawlada Soomaaliya oo ay ka qayliso Xukuumada Somaliland.
Sababaha keenay in Xukumada Somaliland ka qayliso Magacaabista Fawsiyo ayay siyaasiyiin kala duwan ku macnaynayaan , in Fawsiyo ay ahayd shakhsi si aad ah ugu dhex jiray dawlada Somaliland ,waxayna dhawr mar isku dayday in ay xilka ugu sareeya ka qabato dawlada Somaliland ee aan ictiraafka ka helin adduunada.
Saacado kadib markii lagu dhawaaqay Magacaaista ayay Somaliland idaacadaheedu aad u baahiyeen ka hadalka fawsiyo xilkeeda wasiir arrimaha dibadeed , waxaa kale oo qaar kamid a wasiirada Somaliland ka dhawaajiyeen In aanay Fawsiyo imaankarin Gudaha deegaanada Somaliland.
Fawsiyo Yuusuf xaaji Aadan waxay kamid tahay dumarka Somaliland ee ka qayb qaatay dhismaha qaybaha horumarineed ee Shacabka Somaliland iyadoo dhistay Jaamacad ku taala Haraysa, waxaa kale oo ay Samaysay Telefishin ku hadla Afka Soomaaliga kaasi oo intabadan kalin muhiim ah ka ciyaarijiray Horumarka Somaliland, waloow aanu ahayn Telefishinkaasi mid u gaar ahaa baahinta Wararka Somaliland oo qura.
Magacaabista wasirka arrimaha Dibadda ee Soomaliya ayaa dhinaca kale waxaa uu wiiqi karaa wadahadalada labada dhinaca, iyadoo dhinaca kalena uu horumar keeni karo waa hadii ay Somaliland u aragto gabadha qabiil ahaan ka soo jeeda mid ay ula dhaqmaan si ay ku jirto dublamaasiyad wanaag.
Waxaan u la jeedaa , Somaliland waxaa ay diidi kartaa in fawsiyo oo ah xubinta ugu muhiimsan Xukuumada Saacid marka loo eego xilka loo dhiiba ay diidi karto Xukuumada Somaliland n ay la fadhiisato iyagoo doonaya in ay Ignore gareeyaan , taasina waa mid sababi karto in ay hood u dhigto wadahadalada Somaliland ay ku doonayso in ay Ictiraaf uga hesho Somalia iyo Adduunka intiisa kale.